अपडेट : डा. देवकोटालाई अस्पताल परिसरमा ल्याइयो, दूध र जुस पिए (फोटोसहित)
काठमाडौं, २६ जेठ – न्यूरो अस्पतालमा उपचाररत प्रख्यात न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर बनेको छ ।
हिजो साँझ अस्थिर बनेको देवकोटाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउँदै आज बिहान स्थिर बनेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । देवकोटाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अफवाह फैलिएपछि उनलाई आज बिहान अस्पताल परिसरमा ल्याइएको थियो । अस्पताल परिसरमै देवकोटाले दूध र जुस पिएका छन् ।
उपचार भइरहेको काठमाडौंको बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पताल परिसरमा ल्याएर देवकोटालाई चम्चाले दूध र जुस पिलाइएको हो । देवकोटाको पित्तथैलीको क्यान्सर सम्बन्धी उपचार भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘अप्रिय हल्ला’ फैलिएपछि देवकोटालाई अस्पताल परिसरमा ल्याएर आज बिहान दूध र जुस पिलाइएको छ ।
अफवाह फैलिएपछि आज बिहान एक नोट समेत जारी गर्दै अस्पताल र परिवारजनले डा. देवकोटाको अवस्था स्थिर, गम्भीर रहेको र सघन उपचार भइरहेको जनाएको थियो । विगत केही समयदेखि पित्तथैलीको क्यान्सरबाट पीडित देवकोटाको ५ महिनासम्म बेलायतको किङ्स कलेज हस्पिटलमा उपचार गराएर गत बैशाखमा नेपाल ल्याइएको थियो । बाँकी उपचार स्वदेशमै गर्ने देवकोटाकै इच्छाअनुसार नेपाल ल्याइएर उनको उपचार भइरहेको छ ।